Magaaladda Jowhar ee fadhiga u ah Col. C/hi Yuusuf oo lagu xiray Siyaasi ku baaqay in ay is casisho Dowladiisu
Siyaasigan oo ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa loo xiray mar uu ka hadlay wax qabad la’aanta Col. Cabdullahi Yusuf, isagoona ku baaqay in dowladiisu is casisho. Col. Cabdullahi ayaa ku soo noqday Jowhar isagoo aqoonsi iyo dhaqaalaba looga soo deyriyey dibeda, lagulana taliyey inuu joojiyo dagaalada uu oogayo. Mareykanka, Yurub, iyo wadamada Carabtuba waa diideen iney wax taagerro ah siyaan maamulkiisa ku saleysan jabhadnimada. Dharbaaxadaas dibeda uga soo dhacday Col. Cabdullahi Yusuf ayaa waxaa ugu darsoomay haraati kaga timid siyaasiyiintii ku fekerka ahaa oo siyaasada Jowhar u arkay mid gablana oo lagu sii kala dareerayo. Siyaasiyiin badan oo ku fekera Col. Cabdullahi Yusuf ayaa isaga tegey Jowhar iyaga oo ku gaabsaday xaalada ah arag oo dhowr bal waxa dhaca. Kuwo kamida siyaasiyiintaas qarkoodna waxey furteen afka oo waxey goosteen iney ka horyimadaan siyaasada ku saleysan jabhadnimada keliteliskaa.
Jaamac Aadan Dheere ayaa arrinta siyaasada Col. Cabdullahu Yusuf kaga hadlay shir saxaafadeed uu ku qabtay shalay magaaladda Jowhar taasi oo ah arrin ku cusub in lagu sammeeyo magaaladda Jowhar oo uu kaligiis ka taliyo Maxamed Cumar Xabeeb, Maxamed Dheere oo ay imminka marti u tahay garabka dagaaloogayaasha uu u taliyo Col. C/hi Yuusuf oo xaruun ka dhigtay magaalada Jowhar.
Baaqa ah in ay is casilaan qeybaha uu u taliyo Col. Cabdullahi Yusuf, ayuu Jaamac dheere jeediyay xilli uu Jowhar ku suganyahay Korneel C/hi Yuusuf oo walaac siyaasadeed kala soo hoydey safaradiisii uu dhowaan dibeda ugu kicitimay. Waxaa marar badan la saadaaliyey in siyaasada korneylka aysan ka dhamaaneyn qorshooyin aan aragtiyo fog ku saleysneyn.
Siyaasiga Jaamac Aadan Dheere ayaa ku eedeeyay Col. Cabdullahi Yusuf in uu ku guuldareysatay mas'uuliyadii loo soo doortay isla markaana ay taladiisu abuurtay in ay kala qeybiso ummadda Soomaaliyeed. Col. Cabdullahi Yusuf kuma uusan guuleysan inuu ka helo ummadda Soomaaliyeed kalsooni si ay ugu aqoonsadaan madaxweyne, wuxuuna ku dhabar jabay maamul hoosaadka tuulooyinka Bari iyo Jowhar oo maalin walba ay ka taagan yihiin xaalado ay siyaasadiisii ka badin weysey.
Ciidamada qowleysatada maamulka ismagacaabay ee gobolka Sh/dhexe ee ka amar qaata Maxamed Cumar Xabeeb-Maxamed Dheere ayaa xabsiga utaxaabay Jaamac Aadan Dheere iyadoo xarigaasi lala xiriirinayo shirka jaraa'id ee uu shalay qabtay Jaamac Aadan Dheere, kuna dhaliilay dowladda Garabka Jowhar. Col. Cabdullahi ayaa bixiyey amarka lagu xiray Jaamac , taasna waxey tusaale u tahay waxa uu maagan yahay korneylka oo ah dhismaha dowlad kelitelisnimo, taas oo caburineysa fekerka siyaasiyiinta iyo ku tumashada xoriyada hadalka iyo xuquuqda dadnimada.
Jaamac Aadan Dheere oo isugu siyaasad ahaan uu taageersanaa Col. Cabdullahi Yusuf iyo garabkiisa ku sugan magaalada Jowhar ayaa socdaalo uu ku doonayo in maleeshiyooyin beeleed uu ku xareeyo waxa uu ku tegey gobolka Gedo oo uu ka soo jeedo, degmada Xudur, iyo Ethiopia, iyadoo markii dambena uu yimid magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh.dhexe oo markii ugu horeysay ee uu soo galay xabsiga loo taxaabay muddo saacado ahna uu xirnaa iyada oo xilligaasi la weydiiyay cida damiinan karta maadaama beeshiisu aysan ka soo jeedin Bari ama degaanka Jowhar. Wadani Soomaaliya oo dhulkiisa lagu weydiinayo ruqsad uu ku galo waxey horseed u noqoneysaa siyaasada xabashida ay ku dooneyso iney ku qeybiso ummadda Soomaaliyeed. Magaaladda Jowhar oo xaruun u ah maamulka Col. Cabdullahi ayaa ah magaaladda keliya ee Soomaaliya ku taala oo qof soomaaliyeed la weydiinayo xilliga uu galayo magaaladaasi damiin iyo mas’uuliyad, waxayna arrintani timid tan iyo markii ay magaaladaasi fariisin u noqotay garabka Col. C/hi Yuusuf oo dhaqaale badan looga helo sugida amaankiisa.
Mana ahan markii ugu horeysay oo dad siyaasiyiin ah ama kuwo kale xabsiga loo taxaabo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe. Dagaaloogaha ka taliya gobolkaas ayaa maamulkiisu ku dhisan yahay sidii looga tacban lahaa dhaqaalo Col. Cabdullahi Yusuf iyo siyaasiyiinta la fekerkaa, dowlada ka jirta Jowharna loogu raadsan lahaa dhaqaalo. Cid kasta ee loo arko yaboohaas lagu xoolo raadsanayo iney ka soo horjeedo ayaa waxey kala kulmaan dableey calooshooda u shaqeysteyaala tacadi ay u geystaan naftooda, hantidooda iyo tan ehelkooda.
Maxamed Amiin, Buluugleey, Soomaaliya.